Html language ကိုလေ့လာခြင်း။
Myanmar IT Resource Forum » WEB DEVELOPERS ZONE » » Hypertext Markup Language » Html language ကိုလေ့လာခြင်း။
1 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 22nd March 2009, 8:19 pm
တည်နေရာ : လား႐ိႈး
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-03-13
Html ဟာ webpage တွေရေးတဲ့ language တစ်ခုပါ။ သူ့ကို web-authoring tool တွေ၊ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် Macromedia Dreamweaver တွေ၊ Micorsoft Front Page တွေနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့အနေနဲ့တော့ note pad မှာ ရေးတဲ့ နည်းပေါ့ အခြေခံကနေပဲ ပြောပြပါ့မယ်။ကျွန်တော်တအားကြီး သိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သိသလောက်ပေါ့။
Html ကို ဘယ်လို run မလဲ။
Html ကို notepad မှာရေးပြီး browser ပေါ်မှာ run ပါတယ်။ browser ဆိုတာကတော့ Mozilla Firefox တို့ Internet Explorer တို့ကိုပြောတာပါ။ Start>Run ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Notepad ကိုရိုက်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်နည်းက Start>Programs>Accessories>Notepad ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ၀င်လာပါလိမ့့်မယ်။
အခြေခံ tag လေးခု
အခြေခံ tage အနေနဲ့လေးခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
(4)<body><body> စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုရေးတဲ့အခါ အဖွင့်tag၊အပိတ်tag တွေနဲ့ ရေးရပါတယ်။
Blank page တစ်ခုဖန်တီးခြင်း။
ဒါက သူ့ရဲ့ code တွေ ပါ။ ပုံသေရေးရမယ့် code တွေပါ။
ဒါကတော့ နောက်ခံအရောင်ပြောင်းဖို့ရာအတွက်code ပါ။
ဒါကတော့ bgcolor မှာ color code နဲ့သုံးတာပါ။
ဒါကတော့ bgcolor မှာ color name နဲ့သုံးတာပါ။
အပေါ်က ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ရေးသားပြီးရင် သိမ်းဆည်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲ့အတွက်ကတော့ File->Save ကို အရင်နှိပ်ပါ။ ကျလာတဲ့ box က Save in : ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Desktop ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရဲ့ folder ကိုရွေးပြီး file name: မှာ filename.html (file name ဆိုတာနေရာမှာ ဘာနာမည်ပေးပေးရပါတယ်။)၊ Save as type: ကတော့ All files ဆိုရင်ရပါပြီ။
Light Blue #0000A0 Dark Grey #808080
code တွေထပ်လေ့လာချင်ရင်တော့ http://www.computerhope.com/htmcolor.htm ကိုသာ သွားလိုက်ပါတော့။
Last edited by ET on 13th August 2011, 5:45 pm; edited 10 times in total (Reason for editing : "ဒီနေရာ"ကို http://www.computerhope.com/htmcolor.htm ဖြင့်အစားထိုးသည်။)
2 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 5th April 2009, 7:20 pm
အခုလိုဝင်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော် တို့လည်း အလျဉ်းသင့်သလို ၀င်ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်...
3 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 28th May 2009, 6:16 pm
4 Re: Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 13th July 2009, 1:51 pm
code မ်ားအတြင္း စာသားမ်ားထည့္သြင္းေရးသားျခင္း
<body>hello hello my friend
ဒါကေတာ့ preview ပါ။
Last edited by aprilkaunglay on 13th July 2009, 2:18 pm; edited2times in total
5 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 13th July 2009, 2:12 pm
ခေါင်းစဉ်(heading) ကို အသုံးပြုရာမှာ အကြီးဆုံး <H1> ကနေ အငယ်ဆုံး <H6> အထိ ခြောက်ခုရှိပါတယ်။
code တွေနဲ့ပဲ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
<body><h1>First level Heading</h1>
ဒါကတော့ preview ပါ။
6 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 13th July 2009, 3:06 pm
စာပိုဒ်ခွဲခြားရာမှာ <p> tag ကို အသုံးပြုပါတယ်။
တစ်လိုင်း ဆင်းတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ tag တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စာပိုဒ်မြုပ်သွင်းတယ်ဆိုတာဟာ ဘယ်၊ညာ၊ အထက် နဲ့ အောက်ဘက်တွေမှာ နေရာလွတ်(extra space) ချန်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဖော်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို သီးသီးသန့်သန့် ရှိစေချင်တဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက် code နဲ့ preview ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
<body><p>If I havealot of money, I would beavery rich man. My friends would think high of me and respect me. So I would be very proudand happy.</p>
<p> As money can buy many things, I would be able to do many things. But I would be careful tomake myself and my money safe first.</p>
If I havealot of money, I would beavery rich man. My friends would think high of me and respect me. So I would be very proud and happy.<br>
As money can buy many things, I would be able to do many things. But I would be careful to make myself and my money safe first.<br>
<blockquote><p>If I havealot of money, I would beavery rich man. My friends would think high of me and respect me. So I would be very proud and happy.</p>
<p> As money can buy many things, I would be able to do many things. But I would be careful to make myself and my money safe first.</p>
7 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 13th July 2009, 4:57 pm
ဆိုဒ်ထဲကို ပြန်ဝင်လာတဲ့အတွက်ရော.. ဒီလို ပိုစ့်လေးတွေရေးပေးတဲ့အတွက်ပါ.....
8 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 5th September 2009, 8:03 pm
9 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 5th September 2009, 8:05 pm
In this tutorial we useaplain text editor (like
Notepad) to edit HTML. We believe this is the best way to learn HTML.
However, professional web developers often prefer HTML editors like FrontPage
or Dreamweaver, instead of writing plain text.
(Right click on each link, and select
After you have copied the files, you can double-click on the file called "mainpage.htm"
and see your first web site in action.
We suggest you experiment with everything you learn at W3Schools by editing
your web files withatext editor (like Notepad).
Note: If your test web contains HTML markup tags you have not learned,
don't panic. You will learn all about it in the next chapters.
We use .htm in our examples. It isahabit from the
past, when the software only allowed three letters in file extensions.
10 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 8th March 2010, 8:28 am
html မှာ Background ကို ပုံထည် ့လို ့ရသလား။
ရ ရင်ပြောပေးပါ အုံး။
11 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 8th March 2010, 7:41 pm
ရပါတယ် ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က web editor သုံးတယ်ဆိုတော့ Code ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
12 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 8th March 2010, 8:36 pm
အောက်က Code လေးအတိုင်းထည့်ကြည့်လိုက်ပါ ကိုဇော်မင်း...
<body background="D:\_My Documents\_name.jpg">
D:\_My Documents\_name.jpg နေရာမှာတော့ အစ်ကို့ရဲ့ background image ရှိတဲ့ Location ကိုချိန်းပေးရုံပါပဲ...
13 Html language ကိုလေ့လာခြင်း။ on 1st April 2010, 3:03 pm
In this page,need to write about tag.I want share my knowledge. :typing
At tags have two types
1.Standalone tag Example <hr>
2.Container tag Example <html> </html>
If I have mistake of this knowledge ,u can correction to me
14 Re: Html language ကိုလေ့လာခြင်း။